Cengiz Construction ayaa ku guuleysatay qandaraaska dhismaha wadada labaad ee Karawanken Tunnel ee u dhaxaysa Slovenia iyo Austria oo ay Slovenia ka furi doonto dalab 98 milyan Euro ah. Sida laga soo xigtay warbixinnada warbaahinta Slovenia, Wadada weyn ee Slovenia [More ...]
Tareenka xamuulka iyo gawaari wadajirta Austria, 2 Dhimasho
Ku dhowaad magaalada Neudorf bei Wildon ee gobolka Austria ee Styria, tareenka xamuulka ah ayaa ku burburtay gaari ka gudbaya isgoysyada heerkeed, dilka 2. Qoraal qoraal ah oo ka soo baxay booliska gobolka Styrian, Neudorf [More ...]
TÜDEMSAŞ wuxuu sii wataa soo saarista Bogie ee Austria
TÜDEMSAŞ waxay sii waddaa howlaha ay uqabto qaybta labaad ee dhibka loo dhoofiyo Austria. Dufcadii ugu horreeysay ee boomaatada oo lagu soo saari doono guud ahaan cutubyada 120 ayaa dhowaan la soo gaarsiiyey. Habka wax soo saarka ee borooyinka la soo saaray [More ...]
Shaqaalaha tareenka ayaa badbaadiyay roodhiga Black ee Austria
Markii la arkay riyo buur ah oo lagu aasay dhulka Austria, ayay shaqaalaha tareenku joojiyeen nadiifinta riyaha buuraha ah ee la soo badbaadiyey. Shaqaale tareenka Austrian 2 oo qabanaya shaqada nadiifinta tareenka, ariga buuraha hoostiisa barafka ka hooseeya [More ...]
5 Gondola Car ee Alps
5 Cable Car Wagon ayaa lagu soo ururiyay Ski Resort ee Alps: Dukaan lagu dalxiis tago oo ku yaal Kaltenbach, Austria, shan gaari oo xamuul ah ayaa isku dhacay madaxa iyadoo sababtu tahay dabayl xoog badan. Mid kasta oo awood u leh inuu qaado dadka 10 [More ...]
30 ayaa ku dhaawacmay shil tareen oo ka dhacay Austria
30 qof ayaa ku dhaawacmey shil tareen oo ka dhacay meel u dhow magaalada Völlerndorf ee Sankt Pölten ee gobolka Austaralia ee hoose ee Austria. Afhayeenka waaxda dab damiska Franz Resperger oo ka tirsan gobolka Austria ee hoose ayaa sheegay in shilka uu dhacay [More ...]
Laba tareen oo rakaab ah ayaa ku dhacay dalka Austria. Markii qof naftiisa lumiyo, Rakaabka 22 ayaa si xun u dhaawacmay. Laba tareen oo rakaab ah ayaa ku dhacay meel u dhow magaalada Niklasdorf ee Styria, Austria. Isku-ururinta laba tareeno oo ka socda jihada ka soo hor jeeda [More ...]
"Mashruuca Qaranka ee tareenka" ee wax soo saarka TÜDEMSAŞ sameeyaa nooca-Sggmrs gaadhi xamuulka madal Turkey, Europe iyo khadka tareenka Baku-Tbilisi-Kars la soo bandhigay. abuurka ah ee calanka Turkish iyo giraangiro in la qalo oo u dhexeeya Turkey iyo Austria [More ...]
Laba tareen ayaa ku dhacay Austria, 4 dhaawac culus uu gaaray 20
Sida ay sheegayaan wararka horudhaca ah, 4 waxaa si xun ugu dhaawacmay rakaabka 20 taas oo sababtay shilkii labada tareen ee rakaabka ahaa ee ka dhacay magaalada Kritzendorf ee Tulln, Austria. Laba rakaab ah oo ku sugnaa magaalada Kritzendorf, oo qiyaastii 20 kiiloomitir u jirta caasimada Austria ee Vienna [More ...]
Wakiilka Ganacsiga ee Austria ayaa soo booqda Kardemir
Qeybta Ganacsiga ee Austrian, Wakiilka Wasaaradda Gudaha ee Austaralia iyo Undersecretariatka Ganacsiga ee Austrian ayaa booqday Kardemir waxayna sameeyeen indha indheyn. Mansur YEKE, Isuduwaha Maalgashiga ee Agaasinka Guud ee Kardemir iyo Maareeyaha Caafimaadka iyo Badbaadada Shaqada [More ...]
Laba tareen ayaa isku dhuftey madaxa madaxtooyada Austria
Laba tareen ayaa isku dhacay madax-ka-ahaa Awstaraaliya: dadka 7 waa ay dhaawacmeen markii labo tareen oo rakaab ah ay isku dhaceen madax-ku-sugnaa Austria. Waxaan baaraynaa hadii sababta shilka uu yahay khalad calaamad ah ama qalad darawal. Laba Austria ah [More ...]
Bombardier iyo Tareenada Fiktooriya ee Saxeexa Heshiiska Saxiixa 300 TALENT 3 Train
Bombardier iyo Austaralia Saxiixida Heshiiska Tareenka ee 300 TALENT 3 Tareenka: Gaadiidka Bombardier iyo Wadooyinka Federalka Tareenka (ÖBB), hogaamiyaha tikniyoolajiyadda nidaamyada tareenka, 300 BOMBARDIER TALENT 3 model [More ...]
Goobta ugu weyn ee adduunka ayaa lagu dhisi doonaa Austria
Xariga ugu sareeya ee awooda adduunka ayaa laga dhisayaa dalka Austria: Wadada loo maro magaalada Sölden ee dalka Austria ayaa la sheegaa inay tahay jidka ugu awooda badan adduunka. Sölden, dhismaha kaabayaasha jidadka buuraha ee dhowr marxaladood [More ...]